Puntland oo markii ugu horraysay tiro-koob iyo daryeel u fidinaysa carruurta agoonta ah iyo kuwa darbi-jiifka ah. – Radio Daljir
Puntland oo markii ugu horraysay tiro-koob iyo daryeel u fidinaysa carruurta agoonta ah iyo kuwa darbi-jiifka ah.
Garowe, June 13- Waxaa si rasmi ah gobollada Puntland looga bilaabay qorshe baaxadleh oo lagu daryeelayo carruurta da?yarta ah gaar ahaanna agoonta iyo kuwa darbi-jiifka ah ee aan haysan hooy ay gabaad ka dhigtaan iyo hoyaatin qooyseed midna.
Qorshaan oo ah mid ay iska-kaashanayaan hay?adda daryeelka bulshada Puntland iyo wasaaradda qorshayntu ayaa hal ku dhiggiisu yahay tiro-koobidda iyo xannaanaynta carruurta agoonta ah iyo kuwa dabbi-jiifyada ah, waxaana uu xambaarsan yahay qorshe quudin, xannaanayn iyo wax-barid iskugu jira.
Mashruucaan oo loogu talo-galay in laga hirgalyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland ayaa koobaya soona aruurinaya wadar-ahaanta ubadka agoonoobay iyo kuwa ka barabaxay eheladoodii ee gidaar-jiifyada ah, waxaana dib loogu unkayaa nolol cusub oo ay yeesheen carruurtaasi.
Qaybtii koowaad ee lagu daaf-furayey musharuucaas ayaa saaka laga bilaabay magaalada Garoowe, waxaana xaflad ku astaysnayd hirgalintiisa lagu qabtay xarunta wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland taasoo lagu marti-qaaday mas?uuliyiin badan oo ka socotay hay?adaha dawliga ah ee gacanta ku haya mashruuca, hay?ado caalami ah, guddi loo xilsaaray u kuur-galidda nolosha carruurta dayeelka u baahan iyo marti-sharaf kaleeto.
Mas?uuliyiinta dawladda ee ka qayb-galay furitaanka mashruuca waxaa ka mid ahaa wasiirka caddaaladda ahna ku simaha m/weynaha Cabdikhaliif Ajaayo, waxaana khudbad uu halkaasi ka jeediyey uu uga warramay ahmiyadda mashruucaan oo uu ku tilmaamay mid dhaxal-gal ah wax bandanna ugu yaalla ubadda reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba.
Haddii uu hirgalo mashruucani carruurta ugu badan ee looga faa?ideeyaa waxay noqon-doonaan kuwa ka soo jeeda qooysaska faraha badan ee ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya, kuna sugan gobollada Puntland.